काठमाडौँ, ९ फागुन (रासस) । जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै अगाडि बढेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक नेप्से पनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।
साताको पहिलो दिन आइतबारको कारोबारमा अत्यधिक लगानीकर्ता जलविद्युत् कम्पनीको शेयर खरीद बिक्रीमा लालायित देखिएका छन् । सोही कारण माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रू. ४९ को वृद्धि भई रू. ५३९ मा पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट चैतको अन्तिम सातादेखि परीक्षण उत्पादन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
आइतबारको कारोबारपछि नेप्से ३.६६ बिन्दुले सुधार भई दुई हजार ६४०.३४ मा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.२० बिन्दुले घटेर ४७९.५८ मा ओर्लेको छ ।
कुल २०७ कम्पनीको दुई करोड ४३ लाख पाँच हजार ६६ कित्ता शेयर रू. आठ अर्ब ८३ करोड ४६ लाख तीन हजार ९६७ मूल्यमा खरीदबिक्री भए । कारोबार भएका कूल १२ उपसमूहमध्ये आइतबार पाँच उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ भने सात उपसमूहको शेयर भने वृद्धि भएको छ । बैङ्किङ ७.१३, वित्त ४.१८, निर्जीवन बीमा ८३.८८, लघुवित्त ४५.४६ र जीवन बीमा ३६१.४६ ले घटेको छ ।
यस्तै व्यापार १६.५, होटेल १२.१७, विकास बैङ्क २९.३२, जलविद्युत् ८३.२७, उत्पादन ४.४४, अन्य ३९.९१ र सामूहिक लगानी कोष ०.८२ ले वृद्धि भएको छ ।
आइतबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रू. ३६ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड ८० लाख ९१ हजार ३६१ बराबर पुगेको छ । यो देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को हाराहारी नै हो ।
कारोबारका आधारमा नेपाल बैङ्क लिमिटेड शीर्षस्थानमा रहेको छ । सो बैङ्कको रू. ६१ करोड ७४ लाख ७५ हजार ६७२ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै नेपाल पूर्वाधार बैङ्क रू. ५५ करोड २१ लाख १२ हजार २३, ग्लोबल आइएमई बैङ्क रू. ३१ करोड २२ लाख ५४ हजार २१२, एनआइसी एसिया बैङ्क रू. ३० करोड ६६ लाख ७७ हजार ३६०, शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी रू. २७ करोड ५६ लाख ६२ हजार २६३, नबिल बैङ्क रू. २५ करोड ३१ लाख ८८ हजार ३५४, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स रू. २३ करोड ४२ लाख ४७ हजार ६३७, माथिल्लो तामाकोसी रू. २२ करोड ७० लाख १८ हजार ८८६ बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।
कारोबारको आधारमा माथिल्लो तामाकोसी र शिव श्री हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले समान १० प्रतिशतले कमाउँदा, नेपाल पूर्वाधार बैङ्क ९.८९, नेपाल हाइड्रो डेभलपर ९.८२, चन्द्रागिरि हिल्स ९.८०, समृद्धि फाइनान्स ९.७७, एनआइसी एसिया ब्यालेन्स फन्ड ९.७५, एनएमबी हाइब्रीड फन्ड ८.४६ र लिबर्टी इनर्जीका लगानीकर्ताले ८.१३ प्रतिशतले कमाए ।
यस्तै बेस्ट फाइनान्स ३.३७, किसान लघुवित्त ३.२७, सबैको लघुवित्त ३.२७, समिट लघुवित्त ३.२४, फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्स ३.२०, लक्ष्मी लघुवित्त ३.१५, सनराइज बैङ्क ३.१५ र लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले ३.१५ प्रतिशतले गुमाए ।